Hot Shots! (1991) – Channel Myanmar
PG-13 1991 84 min Action, Comedy
IMDB: 6.7/10 86,923 votes
မွနျမာပေါကားတှကွေညျ့ရတာရိုးနပွေီလား? အမရေိကနျပေါကားစဈစဈကွညျ့ခငျြပါသလား? ဒါဆိုရငျတော့ Hot Shots ကို ကွညျ့ဖွဈအောငျကွညျ့လိုကျပါ။
Hot Shots ရုပျရှငျဟာ ဟောလီးဝုဒျက နာမညျကွီးဇာတျကားတျောတျောမြားမြားကို သရျောထားတဲ့ရုပျရှငျကားပါ။
အခုတငျဆကျပေးလိုကျတဲ့ Hot Shots Part 1 ကတော့ 1986 ခုနှဈကထှကျရှိခဲ့တဲ့ Top Gun ဆိုတဲ့ရုပျရှငျကို အဓိကထား သရျောထားတာဖွဈပွီး Kevin Costner ရဲ့ Dances with Wolves လို နာမညျကြျောကားကွီးတှကေိုလဲ နညျးနညျးစီ သရျောထားပါတယျ။
အခု Part 1 မှာတော့ အဖရေဲ့နာမညျဆိုးကို အမှဆေကျဆံထားရတဲ့ တျောပါဟာလကေို လတေပျက ပွနျလညျဆငျ့ချေါလိုကျပွီး လြှို့ဝှကျမဈရှငျအကွီးစားတဈခုမှာ ပါဝငျခိုငျးတဲ့အကွောငျးဖွဈပါတယျ။
ဂကျြလယောဉျကွီး လပေျေါမှာ Drift ဆှဲတာ၊ ဘရိတျအုပျလိုကျတာတှအေပွငျ ရယျမောစရာအခနျးတှအေမြားကွီးပါတာကွောငျ့ မွနျမာရှာကားတှကွေညျ့ရတာ ပငျြးရိလာတဲ့ပရိသတျတှအေတှကျ ကွညျ့သငျ့တဲ့ အမရေိကနျနှားကြောငျးသားကားတဈကားဖွဈပါတယျ။
မကွာခငျမှာလဲ စတားလုံးရဲ့ Rambo ရုပျရှငျကားတှေ အဓိကထားသရျောထားတဲ့ Hot Shots Part2ကို ဆကျလကျတငျဆကျပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
မြန်မာပေါကားတွေကြည့်ရတာရိုးနေပြီလား? အမေရိကန်ပေါကားစစ်စစ်ကြည့်ချင်ပါသလား? ဒါဆိုရင်တော့ Hot Shots ကို ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်လိုက်ပါ။
Hot Shots ရုပ်ရှင်ဟာ ဟောလီးဝုဒ်က နာမည်ကြီးဇာတ်ကားတော်တော်များများကို သရော်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားပါ။
အခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ Hot Shots Part 1 ကတော့ 1986 ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Top Gun ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကို အဓိကထား သရော်ထားတာဖြစ်ပြီး Kevin Costner ရဲ့ Dances with Wolves လို နာမည်ကျော်ကားကြီးတွေကိုလဲ နည်းနည်းစီ သရော်ထားပါတယ်။
အခု Part 1 မှာတော့ အဖေ့ရဲ့နာမည်ဆိုးကို အမွေဆက်ဆံထားရတဲ့ တော်ပါဟာလေကို လေတပ်က ပြန်လည်ဆင့်ခေါ်လိုက်ပြီး လျှို့ဝှက်မစ်ရှင်အကြီးစားတစ်ခုမှာ ပါဝင်ခိုင်းတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဂျက်လေယာဉ်ကြီး လေပေါ်မှာ Drift ဆွဲတာ၊ ဘရိတ်အုပ်လိုက်တာတွေအပြင် ရယ်မောစရာအခန်းတွေအများကြီးပါတာကြောင့် မြန်မာရွာကားတွေကြည့်ရတာ ပျင်းရိလာတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် ကြည့်သင့်တဲ့ အမေရိကန်နွားကျောင်းသားကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
မကြာခင်မှာလဲ စတားလုံးရဲ့ Rambo ရုပ်ရှင်ကားတွေ အဓိကထားသရော်ထားတဲ့ Hot Shots Part2ကို ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Running Time : 1hr 24min
Option 1 yoteshinportal.cc 800 MB 720p
Option2yuudrive.me 800 MB 720p
Option3megaup.net 800 MB 720p
Option4mega.nz 800 MB 720p
Option5upstream.to 800 MB 720p
Along With the Gods: The Last 49 Days (2018) Blu-Ray 1080p 5.1 CH x264 2018
[James Bond] Licence to Kill (1989)
Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981) 1981